Juventus Oo Durba 160 Milyan Oo Euro Ka Faa’iiday Cristiano Ronaldo Oo Aan Wali Heshiis lagaarin | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Juventus Oo Durba 160 Milyan Oo Euro Ka Faa’iiday Cristiano Ronaldo Oo Aan Wali Heshiis lagaarin
(06-07-2018) Kooxda kubadda cagta Juventus ayaa durba dhadhamisay macaanka iyo nolosha cusub ee uu Cristiano Ronaldo u horseedi karo marka sida la filayo ay toddobaadka dambe dhamaystiraan qandaraas afar sannadood ah oo uu u saxeexi doono.
Muddo saddex maalmood ah oo suuqyada iibka ciyaartoyga ay haysatay sheekada Cristiano Ronaldo, waxa cirka isku shareeray saamiyada ay suuqyada ka taagan tahay Juventus, taas oo keentay in lacag dhan 160 milyan oo Euro ay usoo xerooto.
Saamiyada Juventus ayaa gaadhay halkii ugu sarraysay taariikhdeeda waxaana ku kordhay 22 boqolkiiba saddexdii maalmood ee ugu dambeeyey, lacagta kasoo xerootayna waxay noqotay 160 milyan, taas oo ku dhowaad kala badh ka badan lacagta la filayo in Juventus ka bixiso Ronaldo oo dhan 100 milyan oo Euro.
Sida uu sheegay wargeyska dhaqaalaha ee Calcio e Finanza, qiimaha saamiga Juventus oo hore suuqa uga joogay 665 milyan Euro ayaa gaadhay 825 milyan oo Euro, hase yeeshee waxa intan u dheer in mushaharka Ronaldo qaadan doono kooxda ay bixin doonaan shirkado kale sida Agnelli familiy portfolio, iyo waliba Exor Controls, Ferrari, FIAT iyo Jeep, taas oo ka dhigan in Juventus ay lacag xad-dhaaf ah ka heli doonto Ronaldo.
Cristiano Ronaldo oo haysta baabuur badan oo qaali ah aya waxay warbaahinta Talyaanigu sheegtay inuu noqon doono shakhsiga ay shirkadda FERRARI u adeegsan doonto xayeysiinta baabuurteeda, taas oo sannadkii siin doonta 20 milyan oo Euro oo ka baxsan mushaharka Juventus uu ka qaadan doono.
Waxa kale oo Juventus ay lacago badan ka heli doontaa iibka shaadhkiisa oo durba si xawli ah uga bilaabmay suuqyada inkastoo suuq madow uu yahay.